Large-format LED efijery dia tena lehibe ao anatin'ny Digital Out of Home tontolo
Ateriny vonona ny hilefitra, sehatra nomerika mba hitondra marika ho fiainana sy hampifandray mpanao dokam-barotra amin'ny mpanjifa ao amin'ny tsara indrindra-tsaina nametraka hividy.
Betsaka ny safidy misokatra ny toerana te-hametraka ny LED lamba sy ny maro Adi ny mpanjifa nisafidy ny ohatry ny efijery fananany.
Screen fananana maharesy lahatra dia manome tranga maharitra ho an'ny tombontsoa ara-bola sy ny toerana antsinjarany toerana sy ny tompony eo amin'ny toerana izay matanjaka ara-barotra sy ny dokambarotra haino aman-jery fifanarahana vola azo dia voakasika. Raha fitaovana efijery fandaniana tsy misy dikany, ny soa nahafinaritra ny mpanjifa rehefa mamaritra sy hividianana ny haino aman-jery LED lamba dia malalaka-mahatratra. Maro no recouped ny vola lany ny lamba ao anatin'ny fe-potoana iray volana 12-18.
Manampy ny fidiram-bola fanampiny Stream
Fivarotana ny dokam-barotra eo amin'ny lisitry ny toerana Center LED Screen mety ho fidiram-bola renirano lehibe. LED Screens dia mety ho dokam-barotra maro maneho mamela anao mivarotra ny ampahany mbola mitana anjara sy ny fitaovana manokana ho an'ny fampielezan-kevitra. Large Format Feature Screens amin'ny fivarotana dia avo fifamoivoizana faritra ary manao be dia be ny maso dia midika izany Premium Pricing ny dokam-barotra ho an'ny toerana.
Hahazo bebe kokoa mpanofa
Raha toa ny mpanofa dia mety ho maro misafidy eo amin'ny fivarotana lehibe iray Format LED Screen ao amin'ny foibe mety hahatonga ny fahasamihafana. Teo an-tampon'ny manolotra ny sary izany, ny fahafahana mety tsena ny tsena eo afovoany no misy azy io dia manome fahafahana lehibe. Manampy maimaim-poana teny fohy anjara amin'ny fampisehoana koa azo ampiasaina mba mety mpiasa eo amin'ny tsipika